Qowmu Luud Ka Dillaacay Ciraaq Iyo Ragga La Fara-xumeeyo Oo Ka Batay Dumarka - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaQowmu Luud Ka Dillaacay Ciraaq Iyo Ragga La Fara-xumeeyo Oo Ka Batay Dumarka
Baghdad (Jigjigaonline) – Baaritaan ay BBC-da laanta Afka Carabiga ka samaysay dalka Ciraaq ayaa soo saartay natiijo la yaab leh – taas oo ah in ragga la faro xumeeyo ay ka badanyihiin dumarka, baaritaankana waxaa lagu saleeyay dadka dacwooday ee sheegay in wax la yeelay, balse su’aasha waxa ay tahay xaaladdu sidaas ma tahay?.
Dasaaradda BBC-da ayaa laga sameeyay 10 dal oo Carbeed, balse dalalka Ciraaq iyo Tunisia ayaa muujiyay in rag badan ay ka cabanayaan waxyeelada faroxumeynta ee loo geysto.
Markii uu 15 sanno gaaray ayuu aabihiis dhintay, wuxuuna raadsaday shaqo, balse ninkii uu u shaqaynayay ayaa isku dayay in uu kufsado, balse nasiib wanaag waa uu ka baxsaday.
Hase yeeshee dhacdadii ugu xumeyd waxa ay ku dhacday markii uu 16 jir gaaray, markaas oo nin ay qaraabo yihiin oo gurigooda booqasho ku yimid uu xoog ku kufsaday kadib markii uu ka tan badiyay.
Arrintaas waxa ay ku reebtay tiiraanyo badan, waxayna ku kaliftay in reerkooda oo dhan uu ku qanciyo in ay Baqdad u guuraan, halkaas oo ku samaystay saaxiibo quman, balse wuxuu aad ula yaabay in inta badan saaxiibadiis ay la kulmeen waxyeelo xagga galmada ah.
Sidoo kale rag badan oo reer Ciraaq ah ayaa sheegtay in guryahooda ay dhib kala kulmaaan, taas oo ay ku hayaan xaasaskooda.
Waa natiijo la yaab leh iyada oo la ogyahay xaaladda xuquuqul insaanka dumarka dalkaas, iyada oo xitaa qodobka 41-aad ee xeerka ciqaabta Ciraaq waxa uu dhigayaa in aysan dambi ahayn in la garaaco xaasaska.
Hase yeeshee Dr Kathrin Thomas oo ka mid ah mac-hadka Arab Barometer oo daraasadda qeyb ka sameeyay ayaa sheegtay in laga yaabo in dumar badan oo waxyeelo galmo ah loo geystey in ay door bidaan in ay iska aamusaan.
Waxaa fikradaas ku raacsan Belkis Wille oo ka tirsan hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch.
Tusaale isbitaalada Ciraaq waxaa markasta jooga saraakiisha ammaanka, dhaqaatiirtana waxa ay tahay in ay saraakiisha ku wargaliyaan haddii haweenay ay sheegto in nin uu waxyeelo u geystay, balse taasi ma dhacdo, oo dumarka yimaada iyaga oo dhaawacan waxa ay sheegaan waxyaabo kale oo ay ku difaacaan ragga waxyeelada u geystay.
Wiilka la waraystay ee Sami ayaa sheegay in marka booliiska looga dacwoodo waxa dhacay in ay dadka kugu qoslayaan. Wuxuu xusuustaa in markii iskuulka ay wax ka dhacayeen, in isaga lagu eedeeyay in uu ogolaa dhibka ku dhacay.
Balse afhayeen u hadlay booliiska Ciraaq ayaa sheegay in albaabadooda ay u furanyihiin qof kasta oo cabasho qaba.
Daraasadda BBC-da ayaa lagu waraystay illaa 25 kun oo qof oo ku kala nool 10-ka dal oo ku yaala Bariga Dhexe iyo Waqooyiga AFrika. Waxayna noqotay daraasaddii ugu weyneyd ee dad intan la’eg wax lagu weeydiiyay.
Sami hadda waa 21 jir, shaqo wanaagsan ayuu heystaa, balse weli waa uu ka baqayaa in uu sameeyo xiriir lammaane, waxaana ka luntay kalsoonidii raggonimo.
Waxaa ka mid ah wiil lagu magacaabo Sami (ma ahan magaciisa rasmiga ah) , isaga oo 13 ah oo iskuulka dhiganaya ayaa lagu bilaabay waxyeelada kadib markii 3 wiil oo ka waaweyn ay suuliga ku weerareen, markii uu maamulka u sheegay u sheegay wixii dhacay isaga ayaa la canaantay, balse wiilashii iskuulka waa laga eryay, mana la sheegin sababta loo eryay.